Tangles – Dhammadīpa
Posted on 18 Mar 2017 by Ashin Sopāka
I ask you this, Gotama,
He can disentangle the tangle.
It is here this tangle is cut.” – SN 7.6 (Ven. Bodhi)
Jaṭāya jaṭitā pajā;
Taṁ taṁ gotama pucchāmi,
Ko imaṁ vijaṭaye jaṭan”ti.
“Sīle patiṭṭhāya naro sapañño,
Cittaṁ paññañca bhāvayaṁ;
So imaṁ vijaṭaye jaṭaṁ.
“Yesaṃ rāgo ca doso ca,
tesaṁ vijaṭitā jaṭā.
“Yattha nāmañca rūpañca,
Paṭighaṁ rūpasaññā ca,
“ကိုယ်တွင်းသန္တာန်တွင် ဖွဲ့ယှက်တတ်သောတဏှာ၊ ကိုယ်ပသန္တာန်၌ ဖွဲ့ယှက်တတ် သောတဏှာ ယင်း (ကိုယ်တွင်း, ကိုယ်ပ၌ဖြစ်သော) ဖွဲ့ယှက်တတ်သော တဏှာသည် သတ္တဝါအပေါင်းကို ဖွဲ့ယှက်အပ်ပါ၏။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား အရှင်ဘုရားအား ထို အကြောင်းကို မေးလျှောက်ပါ၏၊ ဤဖွဲ့ယှက်တတ်သော တဏှာကို အဘယ်သူသည် ဖြေရှင်းနိုင်ပါအံ့နည်း”ဟု (လျှောက်၏)။
“ပဋိသန္ဓေပညာရှိ၍ ပြင်းစွာ အားထုတ်မှုရှိသော ရင့်ကျက်သည့် ပညာရှိသော (သံသရာဘေးကို) ရှုလေ့ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် သီလ၌ တည်၍ (သမာဓိ) စိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ (ဝိပဿနာ) ပညာကိုလည်းကောင်း ပွားစေလျက် ဤဖွဲ့ယှက်တတ် သော တဏှာကို ဖြေရှင်းနိုင်၏။
“အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်အား တပ်စွန်းမှု ‘ရာဂ’၊ အမျက်ထွက်မူ ‘ဒေါသ’၊ မသိမှု ‘အဝိဇ္ဇာ’တို့သည် ကင်းပြတ်ကုန်၏၊ အာသဝကုန်ပြီး ဖြစ်၍ ရဟန္တာဖြစ်ကုန်၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဖွဲ့ယှက်တတ်သော တဏှာကို ဖြေရှင်းအပ်ပြီ။
“အကြင်နိဗ္ဗာန်၌ နာမ်သည်လည်းကောင်း၊ ရုပ်သည်လည်းကောင်း၊ ထိပါးမှုဟူသော အမှတ် ‘ပဋိဃသညာ’သည်လည်းကောင်း၊ ရုပ်၌ ဖြစ်သော အမှတ် ‘ရူပသညာ’သည်လည်းကောင်း အကြွင်းမဲ့ ချုပ်၏။ ဤနိဗ္ဗာန်၌ ဖွဲ့ယှက်တတ်သော တဏှာသည် ကင်းပြတ်၏။”
Ai thoát triền phược này?”
“Với ai đã từ bỏ,
“Chỗ nào danh và sắc
Chỗ ấy triền phược đoạn.”
Garden Spider ©Ashin Sopāka 2017
This entry was posted in Dhamma and tagged dhamma, wisdom, wrong view by Ashin Sopāka. Bookmark the permalink.
← Previous Previous post: Flower to Flower
Next → Next post: Myanmar Buddhist Titles